Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Septemba 14, 2019 00: 30 Awekho amazwana
Umdwebi ophila kusuka kwezobuciko bakhe, ohlala lapho efuna khona, ophila njengoba ebona kufanele, ngaphandle kokuya ngomuntu, ungumuntu onelungelo ongenalungelo lokukhulumela abanye.	Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Septemba 1, 2019 06: 31 Awekho amazwana
Abazali abaMhlophe / baseNtshonalanga balungiselela izingane zabo iqiniso lasemhlabeni, ukuthi zingazivikela kanjani, zihlale zibusa ezinye izinhlanga, zingalindi lowo obizwa ngokuthi uNkulunkulu kaNkulunkulu.	Funda kabanzi
"Impikiswano ivulekile! Ubumpofu buqhuba imindeni yethu ukuthi yamukele noma yini. "AmaShayina azophothula imisebenzi yawo emihlanu ebeleni labodadewethu, kodwa baphi omama ...	Funda kabanzi
Ngibonga lowo owayeyinhloko yezwe yaseCongo, okwaqala ngo-2001; kuze kube uJanuwari 24, 2019, uyaqhubeka nokwenza izithembiso kubantu baseCongo. "Kunenkinga nge ...	Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Okthoba 29, 2018 12: 37 Awekho amazwana
Injabulo eyodwa ingeyabo bonke. Intukuthelo yomuntu ingeyabo bonke. Izinyembezi zomunye yilezo ezabo bonke. Lokhu kuphila emphakathini! "...	Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Okthoba 27, 2018 00: 30 Awekho amazwana
Ukusebenza kwabantwana ukucebisa uNestlé eCôte d'Ivoire kungenye yezibonelo ezinhle kakhulu, icala lokungabi nabulungisa okungenangqondo nokuhlukumeza komphakathi. Umsebenzi wezingane ...	Funda kabanzi